Barashada Photoshop Afsomali ah
Koorsadan Barashada Photoshop waa koorso 100% practical ah oo hadii aad dhameyso kuu suuro galin doonto inaad sameyso naqashado cajiib ah. Sida aad ku arki doonto casharadan hoos kaga soo bixi doono
Barashada photoshop: hordhac
Barashada photoshop isticmaalka guud ee programka photoshopka
Chapter two: Sawir Qurxinta/Cadeynta:
Barashada photoshop ka qeybta sawir qurxinta:
Chapter three: Designing Logos and Business Cards:
Barashada photoshop ka qeybta Designka iyo naqashadeynta.
CHAPTER 2 SAWIRO QURXINTA
CHAPTER 3 LOGES, BUSINESS CARDS
CHAPTER 4 ID CARD, COVER-PAGES, BILLBOARDS
Chapterkaan Barashada photoshop ka Wuxuu ka koobanyaha ugu yaraan 12 cashar oo muuqaal ah. Casharadaan waxaad aad ku baran doonto wax walbo oo quseeyo Photoshop interfacekiisa iyo sida loo isticmaalo.
Chapterkaan Barashada photoshop ka wuxuu ka koobanayahay ugu yaraan 11 Cashar oo muuqaal ah. Casharadaan Waxa aad ku baran doonto Sida Sawirada loogu Quxiyo Photoshop -ka adigoo baran doono Farsamooyin kala duwan oo ku saamsan sida sawirada loo cadeeyo loona hagaajiyo.
Chapterkaan Barashada photoshop ka wuxuu ka koobanyahay 11 Cashar oo muuqaal ah. Casharadaan waad aad ku baran doonto Farsamooyinka kala duwan ee lagu sameeyo loogoyinka sida loogoyinka wareega ah iyo kuwa proffesionalka ah. Waxaad kale oo aad baran doontaa sida loo sameeyo Business Cards aad iyo aad u quruxbadan.
Chapterkaan Barashada photoshop ka wuxuu ka koobanyahay 14 Cashar oo muuqaal ah. Casharadaan waxaad aad ku baran doonto Farsamooyinka kala duwan ee lagu sameeyo ID-Cards, Cover pages. Waxaad kale oo aad baran doontaa sida loo sameeyo Billboards ama boorarka aad iyo aad u quruxbadan.
Qiimaha waa 10 dolar o hal mar ah.
Mudada waa 2 billood.
WAR BAAHINTA MAXEY KA DHAHEEN WEBSITEKA?